Vaovao - Nanamafy i Geng Shuang fa amin'ny tolona ataon'ny vondrona iraisam-pirenena manohitra ny Coronavirus vaovao, azafady mba hajao ny zava-misy, ny siansa ary ny hafa.
Tamin'ny 20 martsa, ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Geng Shuang dia nitarika ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety mahazatra. Nanontany ny mpanao gazety iray, vao tsy ela akory izay, ny manam-pahaizana tandrefana sasany nilaza fa manana valanaretina virus vaovao ny vokatra novidiana avy any Sina. Mandritra izany fotoana izany dia misy ihany koa ny adihevitra momba ny “vokatra vita any Shina mitondra virus, miantso ny fanaovana ankivy an'ny vita sinoa”. Inona ny hevitrao?
Namaly i Geng Shuang fa hatramin'ny nialohan'ny valan'aretina, dia nahita olona nanely tsaho tsy tompon'andraikitra izy mba hikorontana. Tsy fantatro izay tanjon'ny fanamarihana tsy misy dikany sy tsy misy dikany ary manaitra ireo olona ireo, ny hanaovana tabataba sa hamitahana an'izao tontolo izao?
Nilaza i Geng Shuang fa firenena mpamokatra lehibe i Shina, sady mpamokatra lehibe ary mpanondrana fisorohana ny valanaretina sy fitaovam-pitsaboana (kn95, saron-tava FFP2, sns.). Amin'izao fotoana izao dia miparitaka eran'izao tontolo izao ny trangan'aretina. Firenena maro no iharan'ny tsy fahampian'ny fitaovana manohitra ny valanaretina toy ny sarontava miaro, akanjo fiarovana ary rivotra. Manantena ny hahazo fanampiana avy any Shina izy ireo na hividy avy any Shina. Raha miady amin'ny toe-javatra misy ny valanaretina any Shina, dia nandresy ny zava-nanahirana azy manokana i Shina, nanome ary mbola hanohy hanome fanampiana arak'izay azony atao amin'ireo firenena sahirana ary hanamora ny fividianana varotra any Chine. Ny fitondran-tena tompon'andraikitra ao Shina dia noderain'ny vondrona iraisam-pirenena. Raha China China China, China dia hanana pnemonia avonavona coronavirus. Raha misy miteny hoe "misy poizina i Shina", miangavy anao mba hiantso karazana karazan'olona toy izao hiatrika ny fihanaky ny pnemonia. Aza manao sarontava KN95 vita any Chine (FFP2, sarontava azo atsipy). Aza mitafy akanjo miaro vita sinoa, aza mampiasa fanondranana respiratera sinoa mba tsy hahatratra ilay virus.
Nanamafy i Geng Shuang fa amin'ny ady ataon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin'ny coronavirus vaovao dia mba hajao ny zava-misy, ny siansa ary ny hafa. Ny tena zava-dehibe dia hajao ny tenanao. Na dia eo aza ny siansa tsy mahatratra vetivety dia mbola ho tonga ny sivilizasiôna.